Apple dia te handova ny macOS Control Center | Vaovao IPhone
Miguel Hernandez | 08/04/2021 20:00 | About us
Na dia Tim Cook aza manizingizina ny fandavana ny lehibe indrindra, ny zava-misy dia ny iOS sy macOS dia mihabe ny zavatra itovizany. Mazava ho azy fa tsy hivarotra antsika izy ireo fa tsy maintsy hitovy amin'ny farany, indrindra satria manana MacBook Pro 16-inch maro napetraka eny an-tsena amin'ny vidin'ny aretim-po.
Na izany aza, isaky ny fanavaozana ny rafitra fiasa dia mitombo ny fitoviana, na dia mametraka olana lehibe aza. Amin'izao fotoana izao dia mandinika ny fampiharana ny macOS Control Center mivantana amin'ny iOS i Apple. Fantatrao ve ny fahasamihafana mampitaha azy ireo?
Ny tena izy dia tsy ratsy mihitsy ny Center Control macOS, farafaharatsiny ilay ananantsika amin'ny kinova farany misy, macOS Big Sur. Raha ny marina dia hitako fa tena fahombiazana ny fomba nampidirin'izy ireo ny Center Control amin'ny "kinova lehibe", manome ny famirapiratan'ny klavier, mpisafidy famirapiratan-jiro sy tabilao mahaliana ary koa Widget kely ho an'ny mozika izay nampiasain'ireo mpampiasa macOS notorianay. nandritra ny taona maro. Na izany aza, ny iOS Control Center dia toa mora azo sy haingana kokoa amiko.
Na eo aza izany rehetra izany, nanomboka iPhonesoft.fr Miresaka momba io fanovana io izy ireo, ivon-toerana fanaraha-maso nohavaozina ao amin'ny iOS 15 ary indrindra aingam-panahy avy amin'ilay iray ao amin'ny macOS Big Sur. Na izany aza, ny zava-misy dia tsy nanolotra fakana sary na sary izy ireo, noho izany dia hiandry ny fankalazana ny WWDC21 izay hotontosaina amin'ny alàlan'ny elektronika isika ary hitohy mivantana amin'ny iPhone News, koa manasa anao izahay hitandrina tsara hatramin'ny volana Jona satria hizaha toetra ny iOS 15 izahay mba hitazomana anao hatrany amin'ny vaovao rehetra. Tsy ho ela dia ho fantatsika raha tena handray Center Control mitovy amin'ny an'ny iOS ny iOS 15 sa hijanona ao daholo ny zava-drehetra rano borage.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia te hanana ny iOS 15 handova ny Center Control macOS
Vitsy ny fanovana ho an'ny iPad Pro sy iPad Mini araky ny fivoahana